केरला विमान दुर्घटना : मृत्यु हुनेकाे संख्या १८ पुग्याे, एक मृतकमा काेराेना पाेजिटिभ ! – NepalajaMedia
केरला विमान दुर्घटना : मृत्यु हुनेकाे संख्या १८ पुग्याे, एक मृतकमा काेराेना पाेजिटिभ !
August 8, 2020 146
एजेन्सी, २४ साउन । भारतकाे केरला राज्यमा भएकाे विमान दुर्घटनामा परी मृत्यु भएकाहरुको संख्या १८ पुगेको छ । सरकारी अधिकारीहरुले शनिबार दिएको जानकारीअनुसार दुर्घटनामा परेर अरु कैयौँ यात्रु घाइते पनि भएका छन् ।
एयर इन्डिया एक्सप्रेसको जहाज केरलाकाे कोझिकोड विमानस्थलमै दुर्घटनामा परेको मलापुरम जिल्लाका जिल्ला अधिकारी के गोपाल कृष्णले बताउनुभयो । शुरुमा १७ जनाको मृत्युको खबर आएपनि घाइते मध्ये थप एक जनाको मृत्यु भएपछि कुल मृतकको संख्या १८ पुगेको हो ।
मृतक मध्ये एक जना बाहेक अन्य सवैको शव चिन्न नसकिनेगरी जलेर नष्ट भएको पनि घटनास्थलमा पुगेकाहरुले जनाएका छन् । स्थानीय अधिकारीहरूका अनुसार सबै मृतकको सनाखत भइसकेको छ । साथै मृतक एक जनामा काेराेना भाइरस पाेजेटिभ देखिएकाे समेत बिबिसी हिन्दीले उल्लेख गरेकाे छ । अरू एक मृतकमा पनि काेराेना पाेजेटिभ हुन सक्ने शंका गरिएकाे छ ।
घटनामा परी विमान चालक दीपक साथे र उहाँका सह चालक अखिलेश कुमारको पनि मृत्यु भएको छ । विमानमा चालक दलका छ सदस्य र १८४ यात्रुहरू थिए । घाइतेहरूलाई उपचारका लागि क्यालिकट तथा मलापुरममा रहेका अस्पतालहरूमा पु¥याइएको छ । उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुका अनुसार घाइतेहरु मध्ये १५ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
कोरोनाभाइरसको महामारी फैलिएपछि संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)मा अलपत्र परेका भारतीय नागरिकहरू स्वदेश ल्याउदै गरेको विमान दुर्घटनामा परेको हो । युएइको दुवईबाट शुक्रबार राती भारत आउदै गरेको विमान अवतरण गर्ने बेलामा अत्यधिक बर्षाका कारण धावनमार्ग चिप्लो भएकाले धावनमार्गमा चिप्लीएर दुर्घटना भएको प्रारम्भिक विवरण छ ।
वर्षाका कारण विमानचालकहरूले अवतरण गर्ने पहिलो प्रयास स्थगित गरेका थिए भने दोस्रो पटक अवतरण गर्ने प्रयास गर्दा दुर्घटना भएको हो । दुर्घटना स्थानीय समयानुसार शुक्रबार बेलुका ७.४० मा भएको हो ।
सरकारी अधिकारीहरुले ठूलो वर्षा भइरहेका बेला विमान धावनमार्गमा ठोक्किएको र त्यसपछि ३५ फिट भिरालो ठाउँमा गुडेर दुई टुक्रा जनाएका छन् । दर्दनाक दुर्घटना भएको थाहा पाउने वित्तिकै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेख्दै दुर्घटनामा प्रियजन गुमाउनेका परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्नुभएको छ ।
भारतका नागरिक उड्डयनमन्त्री हरदीप सिंह पुरीले पनि सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत् भारतको विमान दुर्घटनासम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने निकाय एएआईबीले छानविन गर्ने जानकारी दिनुभएको छ ।
भारतमा बर्षायाममा धेरै विमान दुर्घटनामा पर्ने र सयौँको मृत्यु हुने गरेको सरकारी अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
Prevधनुषाबाट बस चढेर कञ्चनपुर पुगेका सशस्त्रका प्रहरी हवल्दारलाई हाकीमले फोन गरेर भने, ‘भाई तिमीलाई कोरोना पुष्टि भयो’
Nextबेरुत विस्फोटन : ६० जना अझै बेपत्ता
ललितपुरमा आज राति १० बजेसम्म कर्फ्यू, उल्लंघन गरे सुरक्षाकर्मीले गोलीसमेत हान्न सक्ने
उपनिवेशको जमाना गयो, समानताका आधारमा सम्बन्ध : प्रधानमन्त्री ओली
एक किशोरी पोखरीमा डुबेको सात घण्टापछि जिवित्तै बाहिर निस्केपछि…